Imandarmedia.com.np: एमाले अध्यक्ष ओलीले किन दिए नेपालमा जनविद्रोह हुने चेतावनी ?
Big News, Main News, News » एमाले अध्यक्ष ओलीले किन दिए नेपालमा जनविद्रोह हुने चेतावनी ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले किन दिए नेपालमा जनविद्रोह हुने चेतावनी ?
हरेक समय राजनैतिक बिषयमा उखान र टक्का जोडेर भाषण गरि आफ्नो बिचारलाई दरिलो बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ बिश्लेषण गरेका छन् । उनले राजपाको मागअनुसार नभइ कतै गरेको कबुलियतनामा अनुसार सरकारले चुनाव सारेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
यस्तै कार्यक्रममै अध्यक्ष ओलीले अहिलेकै अवस्था रहिरहेका जनविद्रोह हुने चेतावनी दिए । सरकार तानाशाही ढंगले अघि बढ्दै गएमा जनविद्रोह हुने चेतावनी दिए पनि ओलीले जनविद्रोहको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने खुलाएनन् । ‘सरकार तानाशाही ढंगले चलिरहेको छ’, ओलीले भने, ‘कि तानाशाह जन्मिन्छ कि जनविद्रोह हुन्छ ।’ राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएर सरकार तानाशाहीकरणतर्फ गइरहेको ओलीको आरोप थियो ।